Forum Sino-Afrique (Focac) : Nahazoan’i Madagasikara tombontsoa -
AccueilRaharaham-pirenenaForum Sino-Afrique (Focac) : Nahazoan’i Madagasikara tombontsoa
04/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nanomboka omaly, tany Beijing, Sina, ny fihaonamben’ny fiaraha-miasan’i Sina sy Afrika. Anisan’ireo firenena 26 manatrika izany i Madagasikara, ka ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no nitarika ny delegasiona malagasy amin’izany. Lohahevitra notsongain’ny mpikarakara tamin’ity indray mitoraka ity ny hoe : « Sina sy Afrika hanangana fiaraha-miasa mafy orona sy ho tombontsoa iombonana ».
Araka izany, nahazoan’i Madagasikara tombontsoa goavana ny fanatrehana ny fivoriambe satria vantany vao nigadona tany an-toerana ny Filoha Hery Rajaonarimampianina, avy hatrany dia nanao fitsidihana ny orinasa CRBC (China Road and Bridge Corporation). Tamin’izany indrindra no nampivoitra ny fifanarahana ka nisian’ny fifanaovan-tsoniam-pifanarahana izay mitondra tetikasana fotodrafitrasa roa lehibe.
Ny voalohany tamin’izany ny fanamboarana ny fitaterana an-dalamby mampitohy an’Antananarivo sy Fianarantsoa, ary ny faharoa kosa ny fanamboarana seranan-tsambo goavana amin’iny faritra Avaratry ny Nosy iny.
Tsy izay ihany anefa no tombontsoa efa azon’i Madagasikara tamin’ny alalan’ny fiaraha-miasa tamin’i Sina fa efa maro. Tao ny fifanaraham-piaraha-miasa amin’ny fanamboarana ilay lalambe mikodana (autoroute) mampitohy an’Antananarivo sy Toamasina, ny fanamboarana ny Lalan’ny Atody eny Mahitsy, ny fanamboarana ny Lalam-pirenena RN5 tapany « A », sns. Izany rehetra izany anefa dia tamin’ity Fitondrana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina no nahazoana azy. Mariky ny fahatokisan’ireo firenena vahiny sy ny mpamatsy vola ny fitantanan’ny Filohan’ny Repoblika ankehitriny anefa izany.
Raha ny marina, manokatra lalam-baovao ho an’i Madagasikara ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ka tsy mitsahatra ny mikaro-bahaolana ho tombontsoan’ny firenena sy ny vahoaka.